राष्टिय – Namaste Host
April 24, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on यिनै हुन् धरहराबाट ख’सेर भाग्यले बा’चेकी रमिला, भन्छिन- म जहाँबाट ख’सेर बा’चे त्यहि रोजगारी पाऊँ !
यिनै हुन् धरहराबाट ख’सेर भाग्यले बा’चेकी रमिला, भन्छिन- म जहाँबाट ख’सेर बा’चे त्यहि रोजगारी पाऊँ ! यिनै हुन् धरहराबाट ख’सेर भाग्यले बा’चेकी रमिला, भन्छिन- म जहाँबाट ख’सेर बा’चे त्यहि रोजगारी पाऊ केही दिनदेखि धरहराका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेका छन् । भूकम्पले भ’त्केको ऐतिहासिक संरचनाको सफलतापूर्वक पुनर्निमाण गरेकोमा सरकारले जनताबाट धन्यवाद खाइरहेको छ । कसैले […]
नेपालप्रेमी थिए राजकुमार फिलिप, यस्तो थियो उनको नेपाल संग जोडिएको इतिहास
April 10, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on नेपालप्रेमी थिए राजकुमार फिलिप, यस्तो थियो उनको नेपाल संग जोडिएको इतिहास
बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका पति राजकुमार फिलिपको ९९ वर्षको उमेरमा शुक्रबार बिहान निधन भएको छ। महारानी एलिजाबेथले सन् १९६१ र सन् १९८६ मा दुईपटक नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दा राजकुमार फिलिप सँगै आएका थिए। बेलायती महारानीबाट विशिष्ट सम्मान ‘ओबीई’ प्राप्त समाजसेवी डा. राघवप्रसाद धिताल ‘ओबीई’ फिलिपको नेपाल–प्रेमलाई विशेष रूपमा सम्झना गर्छन्। ‘उहाँमा नेपालप्रति विशेष सद्भाव थियो’, […]
महाकुम्भ मानिने ऐतिहासिक १५ दिने धार्मिक परिक्रमा आजदेखि शुरु ।
March 13, 2021 March 13, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on महाकुम्भ मानिने ऐतिहासिक १५ दिने धार्मिक परिक्रमा आजदेखि शुरु ।
जनकपुरधाम । मिथिला विहारी वीहार्नी महाकुम्भ मानिने ऐतिहासिक १५ दिने धार्मिक माध्यमिकी परिक्रमा आजदेखि विधिवत सुरु हुनु भएको छ । फागुन कृष्णपक्षको औंसीमा धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ कचुरीस्थित मठबाट भगवान मिथिला विहारी विहार्नी डोला सहित परिक्रमा सुरुभयो हो। आज ( शनिबार ) राति धनुषाको हुनमानगढीमा विश्राम गरेर परिक्रमामा सहभागी साधुसन्त […]
February 2, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on यी ३ राशि जसको हुन्छ सानै उमेरमा धेरै धनी बन्ने योग, कमाउँछन् प्रशस्त धन
काठमाडौँ । ज्योतिशी शास्त्र अनुसार मानिसहरुको भविष्यवाणी आफ्नो राशिहरुबाट पनि थाहा हुने बताउछन् । किनभने जन्म, विवाह, मृत्युको लागी पनि राशि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले १२ वटा राशिहरु मध्ये यी ३ राशिहरु भएको मानिसहरु चाहि एकदमै भाग्यमानी हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । उनीहरुले सानै उमेर देखि नै सुख , शान्ति र धेरै धन आर्जन गर्ने […]
May 19, 2020 January 16, 2021 adminLeaveaComment on असारसम्म भुक्तानी गर्ने व्याजमा सहुलियत दिने राष्ट्र बैंकको घोषणा